Sen. Juriile oo ku baaqay in xili hore laga tashto nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa iyo qorshaha lagu gaarayo – Kalfadhi
Sen. Cabdirisaaq Cismaan Juriile oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha dibedda iyo xiriirka caalamiga ah ee aqalka sare ayaa ka hadlay mustaqbalka doorashooyinka dalka oo uu walaac ka muujiyay sida aan weli looga tashan, iyadoo ay hartay muddo ka yar laba sano.
Wuxuu sheegay in madmadow badani ku jiro sida wax uga socdaan dalka ayna tahay in si deg deg ah wax la isaga yiraahdo.
“Ilaa maanta wax isu yimi oo ka heshiiyay waxa ay noqon doonto marka mudadatani dhamaato, qaranku meeshuu aadi doono, doorasho sidee loo qabanayaa noocee noqon doontaa, ma sidii hore baynu wax ku waxaynaynaa ma qaab cusub bay noqonaysaa, waxay u baahan tahay in la isaga yimaado oo laga heshiiyo” ayuu yiri Juriile.
Sen. Juriile wuxuu sheegay in loo baahan yahay in arrintaas la iska arko isla markaasna marka lagu heshiiyo, iyadoo ay tahay buu yiri in la diyaariyo wadadii lagu gaari lahaa, taas oo u baahan shaqo ah maalin walba waxa la qabanayo.
Wuxuu walaac ka muujiyay xiriirka dowladda federaalka ah iyo dowlad-goboleedyada oo aan weli si rasmi ah u wada-shaqayn. Aqalka sare ayaa gar-wadeen ka ahaa heshiisiinta dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada, wuxuuse Senetarku muujiyay in ay ahayd in la isu yimaado oo si rasmi ah loo heshiiyo.
Mudada xil-haynta madaxweynaha, xukuumadda iyo baarlamanka ayaa ku eg bilawga 2021ka oo ay inaga xigto mudo laba sano ah.
Guddiga doorashooyinka Qaran ayaa sheegay in ay diyaariyaan hannaan doorasho qof iyo cod ah ay dalka uga dhici karto waxaana la diiwaan-geliyay axsaab siyaasadeed, in kastoo aysan weli caddayn in doorashadaasi hirgeli karto.
Dhamaystirka geedi-socodka dastuurka qudhiisa ayaa su’aalo badani weli ka jiraan, taas oo hadii horumar laga sameeyo qayb ka ahaan lahayd in gaaro doorasho qof iyo cod ah.
Guddiga difaaca ee golaha shacabka JFS oo qorshaynaya in ay dhowaan tegaan Puntland